शल्यक्रिका कारण नभई जटिलताका कारण गर्भवतीको मृत्यु
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यशल्यक्रिका कारण नभई जटिलताका कारण गर्भवतीको मृत्यु
विराटनगर/पछिल्ला वर्षमा सिजरियन डेलिभरी अर्थात शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ ।
यसरी बच्चा जन्माउँदा पीडा कम हुन्छ । जसकारण कतिपय महिलाहरूले प्रसव पीडा सहन नसक्ने हुँदा शल्यक्रिया (सिजरियन)मार्फत बच्चा जन्माइदिनसमेत आग्रह गरेको पाइन्छ । तर, गर्भवती महिलाको डेलिभरीको समयमा शल्यक्रिया गरेका कारण मृत्यु हुने समाचारहरू धेरैजसो सुन्नमा आइरहेको हुन्छ ।
र, यसबारेमा सबै कुरा नबुझेकाहरूले डाक्टर र अस्पताललाई समेत दोष दिइरहेका हुन्छन् । शल्यक्रियाका गरेकै कारणले नभई गर्भावस्था वा डेलिभरीको अवस्थामा देखिने विभिन्न जटिलताका कारण महिलाहरूको मृत्यु हुने स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञहहरू बताउछँन् ।
नेपालमा मातृ मृत्युदर बढ्नुमा पनि गर्भावस्थामा हुने जटिलता नै मुख्य कारण हो । किनभने सबैको हकमा गर्भावस्था सामान्य नहुन पनि सक्छ । कतिलाई गर्भावस्थाका बेला वा कतिपयलाई डेलिभरी गर्ने बेला जटिल समस्या आइपर्ने गर्छ । जटिल प्रकारको समस्या भएको हुनाले सुविधासम्पन्न अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउँदासमेत कति महिलाको मृत्यु हुन सक्छ ।
विराटनगरस्तिथ मोरङ सहकारी अस्पतालमा कार्यरत स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण शाह शल्यक्रिया गरेर डेलिभरी गरेकै कारणले गर्भवतीको मृत्यु नहुने बताउँछन् ।
उनका अनुसार डेलिभरीको समयमा आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या आएमा, अत्यधिक रक्तश्राव भएकमा वा जटिल प्रकारको डेलिभरी भएमा मात्र शल्यक्रिया गर्दा गर्भवतीको मृत्यु हुने जोखिम बढ्छ । स्वास्थ्यमा आएको जटिलताका कारण नै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने, ‘शल्यक्रियाका दौरान पनि थप जटिलता बढ्न सक्छ ।’
आमा र बच्चा वा दुवै जनामा भएको जटिलताको कारणले मृत्यु हुने हो । जटिलता आएकै कारण महिलाको मृत्यु हुने सम्भावना पनि बढ्दै जाने डा. शाहको भनाइ छ ।
त्यस्तै, गोल्डेन अस्पतालमा कार्यरत स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डा. के एम गुड्डी पनि डा. शाहको कुरामा सहमत छिन् ।
बच्चा जन्माउनका लागि गरिने शल्यक्रिया फेसन नभएको समेत उनको भनाइ छ । अपरेसन गर्नुपर्ने इन्डिकेसन भए मात्र अपरेसन गरिने गरेको उनले बताइन् । बच्चामा समस्या आएको कारण शल्यक्रिया गर्नुपरे फेटल इन्डिकेसन र आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आएको कारण शल्यक्रिया गर्नुपरे म्याटेर्नल इन्डिकेसन भनिन्छ ।
र, यस्ता इन्डिकेसन देखिएको खण्डमा मात्र शल्यक्रिया गरिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘शल्यक्रिया गरेकै कारण गर्भवतीको मृत्यु हुन्छ भने हँुदैन,’ उनले भनिन्, ‘नर्मल डेलिभरी गर्दासमेत कतिको मृत्यु हुनसक्ने हुन्छ । मृत्यु हुने मुख्य कारण भनेकै जटिलता निम्तिनाले हो, शल्यक्रियाको कारणले होइन ।’
उनका अनुसार डेलिभरी गराउनुअघि जहिले पनि आमा र बच्चामा भएको जटिलताको आधारमा कुन तरिका (नर्मल वा सिजेरियन)ले बच्चा जन्माउन सकिन्छ भनेर निर्धारन गरिने हुन्छ ।
कोसी अस्पताल कार्यरत स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डा. जीवन धमला बच्चा जन्माउनका लागि गरिएको शल्यक्रियाका कारण नै गर्भवती महिलाको मृत्यु नहुने बताउँछन् । आमा वा बच्चाको स्वास्थ्यमा भएको समस्या, जटिलताको आधारमा वा अत्यधिक रक्तश्राव भएमा शल्यक्रिया गर्दा मृत्यु हुने सम्भावना बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
आमा वा बच्चालाई वा दुवैमा देखिएको जटिलताका कारण शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउनुपर्ने हुनसक्छ । उनका अनुसार शल्यक्रियाको समयमा अत्यधिक रक्तश्रावका कारण मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालमा अधिकांश गर्भवती महिलाको शल्यक्रिया गर्दा मृत्यु हुने मुख्य कारण पनि अत्यधिक रक्तश्राव भएको कारण हुने पाइएको छ ।
शल्यक्रिया गर्दा महिलाको मृत्यु हुनसक्ने कारण
गर्भावस्थामा उच्च रक्तचापको समस्या भएमा, आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या आएमा, जटिल प्रकारको डेलिभरी भएमा शल्यक्रियापछि मृत्यु हुनसक्ने हुन्छ । शल्यक्रिया गर्दा पेट र गर्भाशय चिर्नुपर्ने हुन्छ, जसकारण रक्तश्राव हुनु स्वाभाविक हो । कतिपयमा अत्यधिक रक्तश्राव हुन सक्ने तथा रक्तश्रावलाई रोक्न नसक्दा पनि धेरैको मृत्यु हुनेगर्छ ।
पहिला नै शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्माएकामा सालनाल पहिलाकै ठाउँमा टाँसिएमा वा मूत्रनलीतिर टाँसिएमा (प्लासेन्टा एक्रिटा) शल्यक्रिया गर्दा अत्यधिक रक्तश्राव हुने सम्भावना बढी हुन्छ । शल्यक्रिया गरिसकेपछि सङ्क्रमण पनि हुने सम्भावना रहन सक्छ । कतिपय अवस्थामा सङ्क्रमण (सेपसिस) पेटलगायत शरीरभरि फैलिन सक्छ, जसले पनि मृत्यु निम्त्याउन सक्छ ।
कसैको शरीरमा रगत जम्ने क्षमता (कोएगुलेसन प्रोपर्टी) नभएर, इक्लाम्पसिया (उच्च रक्तचाप बढेका कारण बेहोस हुने अवस्था), शल्यक्रियापछि नसामा रगत जम्ने समस्या भएमा, शल्यक्रियापछि रक्तचाप नियन्त्रण नभएमा पनि मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ ।
साथै, सालनालको पोजिसन नमिलेको खण्डमा, प्लासेन्टा परिपक्व भएर रक्तश्राव भए तथा इम्बोलिजम (एम्निओटिक फ्ल्युड आमाको रक्तसञ्चारमा मिसिन गएर फोक्सोमा गएर अड्किएमा रक्तसञ्चारमा अवरुद्ध भएमा)का कारण वा अन्य उत्पन्न हुन सक्ने धेरै जटिलताका कारण शल्यक्रियाका बेला गर्भवती महिलाको अचानक मृत्यु हुनसक्छ वा मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुनसक्छ ।